Eva milalao fandrianao
ny yoga fandrianao
Mats yoga, tsara indrindra ho an'ny rehetra ny yoga tia
Ny mendrika freaks izay miankina amin'ny fomba nentim-paharazana ny fijanonana mendrika ny maha zava-dehibe ny mahafantatra tsara ny yoga. Yoga dia rehetra momba ny fihetsika, fa ny yoga asanas mba ho marina kokoa. Raha te-hahazo ny yoga Mandraisa Soa avy Amin'ny ambony indrindra, dia tsy maintsy azo antoka fa ny fihetsika marina. Mba hahazoana ny fihetsika tsara sy mba ho azo antoka fa ny indray dia mahitsy eo am-manao yoga, asanas mandry amin'ny indray, ny yoga, tsihy dia tena manampy.Raha toa ianao ka sahiran-tsaina mikasika ny raha mila ny yoga, tsihy na izay tokony hividy fandrianao ianao, dia manana vahaolana ho anao. Ireto ny sasany amin'ireo antony tokony iray ihany, karazana yoga, mats sy ny tsara indrindra tokony haka ireo: -
Nahoana yoga, fandrianao tsara ho anao?
Ny yoga, fandrianao manome anao ny manokana toerana ny yoga. Raha toa ianao ka mampihatra ny yoga amin'ny zaridainam-panjakana ho an'ny besinimaro, mamaritra ny toerana noho ny fanampian'ny ny tsihy manakana ny fitsabahana-bahoaka ao amin'io faritra io ary afaka manao yoga, tsy misy korontana.
Izany no mandrafitra ny manohitra ny skid fitaovana. Araka izany, dia hisakana anao tsy Mangozohozo noho ny hatsembohana mitarika ho ratra madinika raha manatanteraka ny ny yoga asanas
Ny yoga, fandrianao foana ny namanao ho amin'ny orana maraina. Raha efa orana nandritra ny alina sy ny ahitra bozaka no lena, manao yoga, ny yoga tamin'ny manokana mats dia handefa anareo hanohy ny yoga, tsy mahazo lena.
Dity ny yoga mats
Ireo no anti-skid mats yoga, izay tsara ho an'ny beginners izay tsy manana fahefana be loatra ny vatany raha manao ny yoga asanas. Tsara izy ireo na dia ho an'ireo izay hatsembohana be dia be mba tsy solafaka.
Travel ny yoga mats
Ireo no mazava ao lanja sy mora amin'ny famoretana mba afaka mitondra azy ireo miaraka aminao mandeha na aiza na aiza. Na izany aza, dia tsy tsara ho ampiasaina isan'andro.
Natural fingotra ny yoga mats
Ho an'ireo izay te-hampihena ny fandraisana anjara manoloana ny fandotoana ny tontolo iainana, ny yoga ireo mats no tonga lafatra. Satria izy ireo dia vita amin'ny sakafo voajanahary, ireo mats no azo antoka ho an'ny olona izay manana hoditra saropady.
Jute ny yoga fandrianao
Ny yoga, mats nentim-paharazana ampiasaina ho vita amin'ny jute noho ny Kilonga singa voajanahary. Izy ireo fa tsy dia maharitra ho safidy tsara raha mitady vola-mahomby safidy
Cotton ny yoga fandrianao
Ireo dia vita amin'ny landihazo lamba matevina sy tsara ho an'ireo izay te-hanasa ny fananany rehetra izao, ary avy eo. Izany ihany koa ny vidin'ny-mahomby safidy mba handinika.
Post fotoana: Oct-24-2018
Luoxi indostrialy valan-javaboary, Luozhuang, Linyi, Shandong, Sina